Eyona ndawo ifanelekileyo eBH and Mines, yomsebenzi nezolonwabo - I-Airbnb
Eyona ndawo ifanelekileyo eBH and Mines, yomsebenzi nezolonwabo
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguSandrobh46
Sisekugcineni kweCidade Shopping, iiblokho ezimbini ukusuka eMercado Central, eParque Municipal kunye nePraça Sete edumileyo, indawo yayo yonke imibhiyozo kunye namabango. Iflethi iqaqambile kwaye ithule, ilungiswe ngokupheleleyo, i-intanethi enikezelweyo (0.5 Giga). IsiPhuthukezi, isiNgesi nesiFrentshi zithethwa apha.
Kwiiblokho eziyi-3 ukuya kweziyi-5 zezona ndawo zinkulu eBelo Horizonte: iSESC Paladium kunye nePalácio das Artes, ukuya kutsho kwiiblokho eziyi-8 ngummandla onomtsalane weSavassi, isangqa senkcubeko sasePraça da Liberdade - ikomkhulu likaRhulumente waseMinas Gerais, kunye neBarro Preto, eyona venkile inkulu yeempahla: "iFashion Hub".
4.94 · Izimvo eziyi-225
Thina, ngolwimi lwabacebi basezidolophini, kumbindi wezitrato zase Tupis naseRio de Janeiro, uninzi lwezakhiwo ezikhoyo ngoku zakhiwa ngexesha elinye neBrasília-DF, ngesitayile esifanayo, ziiflethi okanye izindlu ezikwicomplex ezivulekileyo, ezifanele ukusetyenziswa nangabanye abantu abafuna ukubona isixeko okanye uMbuso wonke.
I-Cidade yokuthenga, ekwisitrato esifanayo, yenza kube lula, iicawa ezimbini, ezikumgama ongaphantsi kweemitha eziyi-100, zinika abantu basekuhlaleni ii-chimes zayo, imeko yangaphakathi. Eyona inkulu, iSão José, yakhiwa phakathi ko-1907 no-1910, kwisiseko sale dolophu, kutshanje ipeyintwe ngemibala yeprojekthi yokuqala (ifoto). Eyona incinci, i-N.S. do Rosário, iqala ngo-1819, xa le ndawo ibibizwa ngokuba yi-Leganal del Rey.
Sinevenkile enkulu ye-Supernosso kwisitrato esifanayo, ukufikelela kwi-3S yeevenkile zokuthenga okanye kwi-Rua São Paulo, ukusuka ngo-8:00 ekuseni ukuya ngo-10: 00 ebusuku; Iivenkile zokutyela ezikufutshane kakhulu, kwisitrato esifanayo isiko elide iButeco Bahia, amaqebengwana enyama kunye neecod, ukongezelela kwizitya ezenziwe ngokukhethekileyo, ukususela ngo-2000 kukhuphiswano lonyaka "Comida Di Butecos". Kwakhona, eRua Rio de Janeiro, 661 (kufutshane nePraça Sete), kwindawo yabahamba ngeenyawo, enendawo ebanzi yangaphandle, umculo, ibhiya emnandi kunye nokutya okumnandi: pop & UMNTWANA. Inxanxathela yeevenkile zokuthenga iCidades inesibonelelo esahlukileyo, kwiinkundla zayo ezahlukeneyo zokutya.
Ikude kancinci, kufutshane neRaul Soares Square, icebiso lethu yiVilla do Príncipe, indawo entle nenkulu, enendawo yokoja kunye neenkonzo zokuzenzela isidlo sasemini, iRua dos Guajajaras 1436.
Umbuki zindwendwe ngu- Sandrobh46
Sisoloko sinekomityi yekofu eshushu kwaye, i-minamente, sithanda i-prose foot (incoko entle). Le ndawo "inobuhlobo" ngaphandle kokucalula kwalo naluphi na uhlobo.